जनै किन लगाउँछन ? – नेपालि भिडियो ब्लग, पहिलो र एक मात्र
जनै धारण गर्दा यो यसको डोरिले मुटुको बाहिरि बिन्दु, फोक्सोको बाहिरि बिन्दु, नाभिको बाहिरि बिन्दु र स्तन क्षेत्रमा स्पर्स गर्छ । य़सरि यसले उर्जाशक्ति र रक्तसंचारलाइ सहयोग गर्ने बिश्वास गरिन्छ ।
वैज्ञानिक दृष्टिबाट पनि जनै लगाउदा मानिसको स्वस्थमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने बिश्वास गरिन्छ । दायाँ कानको नशा अण्डकोष र गुप्तेन्द्रियो सँग जोडिएको हुनाले पिसाव फेर्ने समयमा जनै दाँया कानमा राख्दा शुक्रको रक्षा हुने बिश्वास गरिन्छ । सुत्ने बेलामा जनै दायाँ कानमा राखेर सुतेमा पनि नराम्रो सपना बाट मुक्ति मिल्ने बिश्वास गरिन्छ। तेस्तै जनैले हृदय रोगको सम्भावनालाइ पनि कम गर्ने बिश्वास गरिन्छ । परंपरागत बिश्वास अनुसार, कानमा जनै लगाउनाले पेट सम्वन्धि रोग तथा उच्च रक्तचापको समस्या बाट छुटकारा मिल्छ।
अर्को बिश्वास अनुसार शरिरको मध्यभागबाट पिठ्युमा जाने एक प्राकृतिक रेखाले विद्युत प्रवाहको काम गर्छ। दाँया काँधबाट कम्मरसम्म फैलिएको यो रेखा माथि जनै लगाउँदा यसले विद्युत प्रवाह नियन्त्रित हुने बिश्वास गरिन्छ। यसरि विद्युत प्रवाहको प्राकृतिक रेखालाइ पछ्याउँने जनै धारणले काम-क्रोधमा नियन्त्रण राख्न सजिलो हुने पनि बिश्वास गरिन्छ ।
यसरि जनैको प्रयोगले आयु, तेज र बल प्राप्त हुनुका साथै यसले मुटु, कलेजो, फोक्स र अन्य अंगहरुलाइ क्रियाशिल बनाउन पनि सहयोग गर्ने बिश्वास गरिन्छ । नकारात्मक उर्जा र भावनाहरुलाइ निस्तेज बनाएर मन, बुद्धि र चित्त शुद्ध बनाउन जनैले योगदान दिने बिश्वास गरिने भए पनि यि कुराहरु वैज्ञानिक रुपमा पुष्टि भएको चाँहि मलाइ थाह भएन ।
जनै पुर्णिमाको परिचय भिडियो:
This entry was posted in समाज, भाषा र चालचलन, Festivals and tagged Janai Purnima. Bookmark the permalink.
← जनै पुर्णिमाको परिचय र रक्षा बन्धन आशिर्बाद श्लोक
गाइजात्राको परिचय →